Odisha Beach Tours | Inchanting beaches - Dial Zvino 993-702-7574
Kuda kwekuzorodza beach therapy? Dombo reMatombo 'Odisha Beach Tours ndiyo mhinduro yako yakanakisisa. Odisha nderimwe rematunhu akakomba kuti ave nemakiromita anopfuura 485 emhepo inofadza. Yakakomborerwa nekunaka mvura yakachena yebhuruu, yakabatsirwe nedzimwe tsvina yakachena uye yakawanda iyo nyika inofanira kupa. Sandhu Makungu anopa mukana wakanakisisa weAdisha Beach Tours. Ndiyo nzvimbo yakakwana yekusunungura paunotora mukanakisa kwezuva. Zvine nhamba huru yezvikwata zvekuenderera mberi zvinokura, mabhandi e Odisha ari kunyanya kufambidzana, achigadzira nzira isina kugadzikana yokuti iwe utore kurota kwako. Odisha inzvimbo yakakwirira yegore rose, ine mamiriro okunze akanaka mumwaka wose. Kwete chete izvozvo, nzvimbo yakakura yegungwa inoreva kuti nzvimbo dzekugara muhombe muOdhiisha dzinosiyana zvikuru zvichienderana nenzvimbo. Odisha mabhandi anokonzerwa nekusimudzira zvisikwa zvipenyu zvakasiyana-siyana kusvika kune dzimwe nyika-mapurani ekugadzira, kurongeka kwakanaka kwekuzorodza runyararo, zvichiita kuti ive nzvimbo yakakwana kune vatashanyi vanobva kumativi ese eupenyu vachitsvaga zororo nguva yeupenyu hwose. Odisha Beach Tours inoufukidza zvose. Hapana nzira iri nani yekuwana nayo mafaro aya mahombekombe akaisvonaka kunze kweSand Pebbles 'pfupa reAdisha beach Tours.
Aya mapepa anopa maonero eimwe nzvimbo inoshamisa zvikuru Odisha inofanira kugovera, uye ichikubvisa iwe kubva munzira yakarohwa. Nhungamiro yako yekuziva inokufambisa pazorwendo rusinganzwisisiki rinosanganisira kunakidzwa nekudya kunonaka uye kwechokwadi kunowanikwa munyika yose. Hapana chinhu chakangofanana nekuchera zvigunwe zvako mujecha uye kunyura mukati mekudenga kunotyisa kwezuva. Zvose zvinoshungurudza uye zvinoshungurudza zvinoshambidza mumvura ine ruvara rwebhuruu, zvichikusiya iwe wakasununguka hukama hwekuzorora iwe wausingazivi kuti unogona.
Kana iwe wakagadzirira kuwana ruzivo rusingaperi rwemakungwa aya ane ruzivo rwakanaka, tapota taura nesu nhasi uye regai tibatsire iwe kuwana yakakwana yeOudisha beach tour kwauri. Tinokupa iwe wepamusoro yeBhangi Tour Operators muHodisha, kusanganisira Beach Resorts muOnisha, kuitira kuti uve neGala yenguva ne Sand Sand Pebbles 'Odisha Beach Tourism.
Odisha Beach Tour Packages (Nights / 9 days | Mutambo Wokushanyira: 008)
Garai uye mukakwazisa paunosvika kuKolkata Airport / Railway Station uye uende kune imwe hotera yakatangwa. Zuva roga roga rakasununguka pamabasa avo pachavo. Overnight at Kolkata.
Mushure mokudya kwemazuva emangwanani zuva rekushanyira kuColkata uye masikati masikati pachiteshi chezvitima kuti tiende muchitima kuenda kuBalasore. Sarudza kubva kuchiteshi chezvitima cheBalasore uye wotamira ku Chandipur. Tarisai muhotera. Usiku huno pa Chandipur.
Zuva rakakwana rara pa Chandipur Beach. Usiku huno pa Chandipur.
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwekudya kuenda kuBhubaneswar kunoshanyira mugwagwa Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri (mahedheni eBuddhist uye Stupas). Usiku huno kuBhubaneswar
Kushanya kweMangwanani kweTemberi kuBhubaneswar (Parsurameswar, Mukteswar, Lingaraj, Rajarani & Vaital). Ipapo uende kuKonark uchishanyira Dhauli (Ashokan Edicts) uye Pipli (Appliqué Work village). Kudya kwemanheru pedyo nerwizi kunosangana negungwa uye kunonoka pamahombekombe. Usiku huno paKonark.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaKonark Sun Temple (Black Pagoda), Chandrabhaga Beach uye Ramchandi Temple Puri chengetera kune hotera. Kwapera masikati kushanyira kuna Ishe Jagannath Temple kuti vatore muParamende Aalati Darshan. Manheru anozororazve paGold Golden Beach & Beach Market yePuri. Usiku huno paPuri.
Kushanyira mangwana kuna Ishe Jagannath tempile (Vasinga-Hindu havabvumirwi mukati memutemberi), Gwara Guru Pashure pokudya kwekudya kwemafambisi kuenda kuGopalpur kushanyira Raghurajpur (Inzvimbo yemumusha) uye Chilika Lake kuBarkul. Farira chikepe chando mukati megungwa kuti uone Kalijai Island & Nalaban Birds Island.Overnight kuGopalpur.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaTaptapani Hot Sulfur Spring Masikati anononoka paGopalpur Beach. Usiku huno paGopalpur.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kuBerhampur Railway Station / Bhubaneswar Airport kwekufamba rwendo.